Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: ပိစိ၏ အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ်
Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat
Map of Language School in Yangon
ပိစိ၏ အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ်
ကျနော် လား ?
ကျနော့် အကြောင်းမပြောခင် ကျနော့်ကို စိတ်တိုင်းကျ ကိုင်တွယ်အသုံးချနေတဲ့သူနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်။
သူ့နာမည်က ဝင်းဒိုးယူဇာ (Windows User) တဲ့။ အတိုကောက်ကတော့ ယူဇာ လို့ခေါ်ကြတယ်။ ဒါဆို သိလောက်ပီလား။ ကျနော် ဘယ်သူလည်း ဆိုတာ... :)
ကျနော်က ပိစိ(PC) ပေါ့ဗျာ ဝင်းဒိုးတင်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးပေါ့။
ယူဇာက ကျနော် ပိစိကို တကယ်ချစ်တယ် တကယ်နှိပ်တယ်ဗျာ...။ တချိန်လုံး မျက်တောင်မခတ်ပဲ ကြည့်နေတာ။ သူ့ရည်းစားတောင် သူဒီလောက်စိုက်ကြည့်မယ် မထင်ဘူး။ ပိစိမောက်စ်ကို ကိုင်ထားတာများ သူ့ရည်းစားမြင်ရင်တောင် မနာလိုချင်စရာ... :)
အထင်မလွဲပါနဲ့ ပိစိကို သုံးပြီး နေရာတကာ လျောက်သွားတာကို ပြောတာဗျ။ အင်တာနက်ထဲမှာလေ...။ ခင်ဗျားတို့ ကားတစ်စီးနဲ့ လမ်းကြိုလမ်းကြား လျောက်မောင်းသလိုပေါ့။ အင်တာနက်ထဲဝင်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ အင်တာနက်ထဲမှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေဆီ လျောက်လည်နေတာပါပဲ။ လမ်းမသိရင်ရင် လိပ်စာ မေးဘို့ကတော့ Google လို search Engine ဆီသွား စုံစမ်းရတာပေါ့။
ပိစိရဲ့ ယူဇာ က တမျိုးဗျ။ သူသွားချင်တဲ့ နေရာဆို စွတ်သွားတာပဲ။ အင်တာနက်ထဲက အိမ်ကြိုအိမ်ကြား လမ်းကြိုလမ်းကြား မကျန်။ ခါတလေ ပိစိ နန်းတော်ထဲလည်း ရောက်ဘူးတယ်။ ဘုရားလည်း တက်ဖူးတယ်။ အဟဲ... ပြောရမှာတောင် ရှက်စရာကောင်းတဲ့ နေရာလည်း ရောက်ဖူးတယ်ဗျာ... :) ယူဇာသွားလိုတဲ့ နေရာ မရောက်ရောက်အောင် လိုက်ပို့ချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဂျုံးဂျုံးကျသွားပေ့စေ။ လမ်းကြောင်း(ကွန်နက်ရှင်)သာ ကောင်းပစေ ပို့ပေးမယ်။ အဲ...တစ်ခုပဲ ယူဇာကို ပြောချင်တယ်။ အန်တီဗိုင်းရပ်စ် ဆေးလေးတော့ မှန်မှန်တိုက်လို့...။ ကပ်ချေး (Browser Cache) တွေလည်း မှန်မှန်ရှင်းပေးပါလို့။ နို့မို့ဗျာ ယူဇာလစ်တုန်း တခြားသူက လာကိုင်လိုက်ရင် (ယူဇာတော့ မသိဘူး) ပိစိတော့ ရှက်လွန်းလို့ ကပ်ချေးတွေ ပြည့်နေတဲ့ မျက်နှာ ဘယ်ထားရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ အဟီးးး။
ပိစိ ပြောပြချင်တဲ့ ဟာ..အဓိကက ဒါ မဟုတ်ဘူးဗျ...။ ခေါင်းစဉ်တော့ တပ်ထားပါရဲ့။ ပိစိ၏ အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ် အကြောင်းလေ။ ယူဇာ သိနေလား ဘာလားတော့ မသိဘူးဗျ။ ယူဇာက လိပ်စာ (Web Address - url) တစ်ခုခုကို သွားချင်တယ်ဆို ပိစိက အဲတာ ဘယ်နေရာလည်း အရင် စုံစမ်းရပြီ။ ပိစိက စက်လေ။ အင်တာနက်ထဲမှာ ပိစိတို့လို စက်တွေ အချင်းချင်း အမှတ်သညာ ပြုထားတာက အိုင်ပီလို့ ခေါ်တဲ့ ဂဏန်း သုံးလုံးတွဲ နံပတ်လေးတွေ လေးတွဲနဲ့ ခင်ဗျ (ipv4)
ယူဇာပြောတဲ့ လိပ်စာကို ပိစိရဲ့ အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ် ထဲမှာ ချရေးထားလား လှန်ဖတ်ရတယ်။ အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲမှာ ပါရင် အိုကေပေါ့ အဲ့ကို တန်းသွားလိုက်တာပဲ...။ အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲမှာ မတွေ့ရင်တော့ စီနီယာကြီး ဒီအန်နက်စ်ဆာဗာ (DNS Server) ကို လှမ်းမေးရတယ်။ ဒီအန်နက်စ်ဆာဗာကတော့ ခတ်ပြတ်ပြတ်ပဲဗျာ။ သူသိရင် သိတယ် ပြောတယ်။ မသိရင် မသိဘူးပဲ။ အဲ... လိပ်စာ အိုင်ပီ ရပီဆိုရင်တော့ အိုကေပဲ... ဂိတ်မှုး(Gateway) ရုံးဘေးက လက်မှတ်စစ်ပရောက်ဆီ (proxy server) ကို မျက်နှာချိုသွေးရတော့တာပဲ...။ သွေးရသဗျာ။ ဂိတ်မှူးက ဂိတ်ပတ်စ် ပေးရင်တောင် သူက တားချင်တားသေးတာလေ။ လက်မှတ်စစ် ပရောက်ဆီက သူ့စာရင်းမှာ ငြိနေတယ် ဒီ အိုင်ပီ လိပ်စာ ပေးမသွားဘူး ဆိုရင်တော့ ယူဇာ မျက်နှာ ညိုးပီပေါ့။ တခါတလေ တောက်ခေါက်တာလည်း ခံရတယ်။
ပိစိ ပြောပြချင်တာလေး ရိပ်မိလောက်ပီလား။ ပိစိရဲ့ အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ဆိုတာ သုံးတတ်ရင် ဆေး၊ မသုံးတတ်ရင် ဘေးလို့တောင် ပြောလို့ ရတယ်။ ပိစိက အင်တာနက်ထဲ ဝင်ဘို့ကို ဒီစာအုပ်ကို လက်စွဲထားရတာလေ။ (ပိစိ ကိုယ်နဲ့ မကွာပဲ) ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ရေးထားတဲ့ လိပ်စာအတိုင်းသွားရတာ...။ ဥပမာ Google ကို မှတ်ထားတယ်ပဲ ဆိုပါစို့...။ Google ၏ အိုင်ပီလိပ်စာအမှန်က 74.125.239.19 ပဲထားပါတော့။ ပိစိက အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲမှာ ရှာလိုက်တယ် (ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ စာအုပ်ထဲမှာ ဒီလိပ်စာ မပါပါ)။ မတွေ့ဘူး ... ဒါနဲ့ DNS ဆာဗာကြီးကို မေးလိုက်တယ်။ DNS ဆာဗာကြီးက မလိမ်ချင်ရင် 74.125.239.19 ပေါ့ကွလို့ ဖြေမယ်။ ဒါနဲ့ ဒီအိုင်ပီနံပတ်လေးကိုင်ပီး ပရောက်ဆီဆာဗာမှာ သွားစုံးစမ်းတယ် ထွက်လို့ ရမလားပေါ့။ ရတယ်ဆိုရင် ယူဇာကို Google ရောက်အောင် ပို့ပေးလိုက်ရုံပဲ။ မရရင်တော့ အဆက်ဒနိုင်းပေါ့ :(
အဲ့တာကို ပိစိရဲ့ အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲမှာ Google အိုင်ပီလိပ်စာကို အမှားရေး (တလွဲ) ပြထားမယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ? ပိစိရဲ့ လက်စွဲစာအုပ်ပဲလေ။ အဲ့မှာ မှတ်ထားတဲ့ အိုင်ပီလိပ်စာဆီပဲ ယူဇာ့ကို ပို့ပေးလိုက်မှာပဲ။ တကယ့် Google လား ဘာလား ပိစိက မသိနိုင်ဘူးလေ။ ပိစိနဲ့ ဆိုင်မှ မဆိုင်တာ။ ပိစိတာဝန်က ယူဇာက Google သွားချင်တယ်ဆို ပ-ဦးစားပေး အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ် မှာ ရှာတယ်။ မတွေ့ရင် ဒု-ဦးစားပေး ဒီအန်နက်စ်ဆာဗာ ကို မေးတယ်။ အိုင်ပီလိပ်စာ ရရင် အဲ့အတိုင်း ပို့ပေးလိုက်တာပဲ။ ပ-ဦးစားပေး အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ် ထဲမှာ မှတ်ထားတဲ့ လိပ်စာစာရင်းကို ပိစိ မလိုက်နာလို့ မရဘူး။ ဒါ ပိစိရဲ့ တာဝန်ပဲ။
ပ-ဦးစားပေး အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ် ရဲ့ မူရင်း ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပိစိ ကို အင်တာနက်ထဲမှာ အိုင်ပီ ရှာရင် အမြန်ရအောင်လို့ပါတဲ့။ ဒီနေ့ဒီအခါမှာတော့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ လွဲဖယ်ပြီး အခြားရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ အသုံးပြုမှုတွေလည်း ပြုလာကြပါတယ်။
ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေလည်း ဆိုတော့... အင်တာနက်ကို လမ်းကြောင်းလွဲဘို့ပါ။
၁) မိဘများက သူတို့ မဝင်စေချင်သည့် url လိပ်စာများသို့ သားသ္မီးများ ဝင်မရအောင် လမ်းကြောင်းလွှဲလိုသည့်အခါ။
၂) Genuine ဝင်းဒိုး မဟုတ်သည့် ပိစိများ နှင့် ဝင်းဒိုးအပ်ပ်ဒိတ်ဆာဗာများအကြား လမ်းကြောင်းလွှဲ အဆက်ဖြတ်ထားလိုသည့်အခါ
၃) အလားတူ ကီးဂျန်သုံးဆော့ဝဲများ (ခိုးကူးခွေ)များ မူရင်း ဆော့ဝဲ၏ ဆိုဒ်မှ update server နှင့် အဆက်ဖြတ်ထားလိုသည့် အခါ... များတွင် ပိစိ၏ အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲမှာ အိုင်ပီ လိပ်စာ အမှားတွေ ရေးထည့်ထားတတ်ကြပါတယ်။
၄) (မှတ်ချက်) မိမိ၏ LAN ထဲမှာ ASP ဆာဗာထောင်ပြီး အင်တာနက် ဟော့စ် စမ်းသုံး၊ လေ့ကျင့်သူများလည်း ဒီလိပ်စာဆီ ပိစိတို့ တန်းရောက်သွားအောင်လို့ url နဲ့ အိုင်ပီ လိပ်စာ တွဲရေးထည့်ထားတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလို url နှင့် IP နံပတ်ကို လှီးလွှဲပေးလိုက်ခြင်းကြောင့် ထို url အမှန်တကယ် ၇ှိရာနေရာဆီ ယူဇာကို ပိစိ လိုက်မပို့ပေးနိုင်တော့ဘူးပေ့ါဗျာ။ ဟို ဖိုင်းယားဝေါနဲ့ သွားမရောနဲ့ဦးဗျ။
ဖိုင်းယားဝေါက url နဲ့စစ်ပြီး လမ်းပိတ်တဲ့ စံနစ်၊ ပိတ်ခံရရင် ပိတ်ထားကြောင်း ယူဇာကို ပြန်သတင်းပို့မယ်။ ထွက်မရဘူးဘာဘူး ပြောမယ်။
ဒီ လမ်းညွှန်စာအုပ်က url နဲ့ စစ်ပြီး လမ်းကြောင်းလွှဲတဲ့စံနစ်၊ လွှဲထားတော့ ရောက်တော့ရောက်သွားမယ်၊ တလွဲ နေရာ တစ်ခုကို။ ဒီတော့ ယူဇာကို ဘာမှ အမှားအယွင်း ပြန်သတင်းမပို့ဘူး။ ရောက်သွားတာကိုပဲ ပြပေးလိုက်တယ်။
ပိစိရဲ့ ဒီ အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဝင်ဖတ်ချင်တယ် ဆိုရင် အောက်က နေရာ ဖိုဒါထဲမှာ ရှိပါတယ်။ (န
Windows 95 ဆိုရင် C:windows
Windows 98 ဆိုရင် C:windows
Windows Me ဆိုရင် C:windows
Windows 2000 ဆိုရင် C:windowssystem32driversetc
Windows XP ဆိုရင် C:windowssystem32driversetc
Windows NT ဆိုရင် C:winntsystem32driversetc
Windows Vista ဆိုရင် C:windowssystem32driversetc
Windows7ဆိုရင် C:windowssystem32driversetc
အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ် ဖိုင်အမည်က hosts တဲ့ ရှင်းရှင်းလေးနော် ဘာ ဖိုင်အမျိုးအစား (extension) မှ မပါဘူး။
သူ့ကို ဖွင့်ဖတ်ချင်ရင် Notepad နဲ့ ဖွင့်ဖတ်ပေါ့။ ဖွင့်လိုက်ရင် အထဲမှာ ဂလိုလေး မြင်ရမယ်။
အရှေ့က # ခံပြီးရေးထားတာတွေကို ပိစိ မဖတ်ဘူး။ မခံထားတဲ့ လိုင်းတစ်လိုင်းစီဟာ ပိစိအတွက် လမ်းညွှန်လိပ်စာတွေပဲ...။
ဥပမာ 127.0.0.1 ဆိုတဲ့အိုင်ပီဟာ localhost ရဲ့ လိပ်စာ ဆိုရင်
127.0.0.1 နဲ့ localhost ကို စပိတ်တစ်ခု ခြားပြီးသာ ရေးပေး၊ ပိစိ ဖတ်တတ်တယ်။
အလားတူပဲ www.yahoo.com ရဲ့ အိုင်ပီလိပ်စာဟာ 72.30.2.43 ဖြစ်ပြီး
www.facebook.com ရဲ့ အိုင်ပီလိပ်စာဟာ 69.63.181.12 ဆိုတော့
လို့ ရေးထားလိုက်ရင် yahooနဲ့ facebook ကို သွားဘို့ရာ ဒီအန်နက်စ်ဆာဗာကြီး သွားမေးစရာတောင် မလိုတော့ဘူး။ ပို မြန်သွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လိပ်စာကို အမှားရေးကြည့်ကြမယ်။
လို့ ရေးပလိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ... ခွိခွိ...
ယူဇာက yahooသွားချင်ရင် ပိစိက facebook ကို ပို့ပေးမိမယ်။
ယူဇာက facebook သွားချင်ရင် ပိစိက yahoo ကို လိုက်ပို့ပေးမိမယ်။ ဒီလို ဗရုတ်ကျလို့လဲ ရတယ်။ ပိစိ အလုပ်ပဲ ပိစိ လုပ်တာပဲ။ အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို ပြင်တာ ဖျက်တာ ယူဇာ့ သဘောပဲလေ..။ ဒါပေမယ့် ပိစိစာအုပ်ကို ယူဇာ အလကားနေ ဝင် ပြင်ဖျက် မလုပ်နိုင်အောင်တော့ နည်းနည်း ဖွက်ထားရတာပေါ့ :D တော်ကြာ ကလိလွန်းလို့ ဖိုင်ပျက်သွားရင် ပိစိအလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
(မှတ်ချက်။ ။ လိပ်စာလွှဲဘို့ အန္တရာယ်အကင်းဆုံး၊ စိတ်အချရဆုံး အိုင်ပီမှာ 127.0.0.1 ဖြစ်ပါသည်။ ဒါ ပိစိကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 127.0.0.1 is me myself. It is safest ip) ဒီတော့ ပိစိမှာ အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ် ရှိမနေရင် ဘာဖြစ်မလဲ မေးပါဦးလား။ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ သူက ပ-ဦးစားပေးဆိုတော့...သူမရှိရင် ဒုဦးစားပေး ကိုပဲ လိပ်စာ လှမ်းမေးမှာပဲ။ နည်းနည်း ကြာရုံက လွဲ တခြားမရှိပါဘူး။
အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို ပိစိ မသိအောင်ဖွက်ထားမယ်ဆိုရင် (hosts ကို hosts.txt လို့ ပြောင်းလိုက်ရုံ )
To disable Hosts fromaDOS window:
rename hosts hosts.txt (press enter)
အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို ပိစိ သုံးစေချင်တယ်ဆိုရင် (hosts.txt ကို hosts လို့ ပြန်ပြောင်းလိုက်ရုံ)
To Enable Hosts fromaDOS window:
rename hosts.txt hosts (press enter)
ပိစိ ဖောက်သည်ချချင်တဲ့ ပိစိ၏ အင်တာနက် လမ်းညွှန်စာအုပ်အကြောင်းက ဒီလောက်ပါပဲ...။ ဆက်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် Google သာခေါက်လိုက်ပေတော့... :)
(*** တလောက ဆင်မင်း ပို့ပေးတဲ့ Windows update ကို Firewall နဲ့ ပိတ်နည်းလေး ဖတ်လိုက်ရတာနဲ့ အကြံရပြီး တလက်စတည်း ဒါလေးပါ ဆွေးနွေးပြချင်စိတ် ပေါ်လာတာနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ
သိတယ်မှတ်လား ဆေးဆိုတာ သုံးတတ်ရင် ဆေး၊ မသုံးတတ်ရင် ဘေးတဲ့။ ကိုက်အောင်သုံးရင် ဆေးပေါ့ဗျာ။ ဆေးကို ဘေးဖြစ်အောင် သုံးရင်တော့ ဘေးပေါ့။ ဥာဏ်လေးနဲ့ ယှဉ်ပြီးသာ သုံးနော်း)
please try Google hosts.
Posted by Ko Gyii at 7:50 PM
Labels: အထွေထွေ ဗဟုသုတ
ကျနော် ရေးထားခဲ့သမျှ စုစည်းကြည့်ရင်...
ဝှက်စာ ဖော်ဘို့ ဆော့ဝဲ WhetSar
ဒီလို ဒွန့် ဒွန့် ဒွန့် လုပ်ရုံနဲ့ ကျေမယ်လား
ကာတွန်းကားများ ညွှန်းရာတွင် သုံးလေ့ရှိေ သာ စကားလုံး...
Facebook က အီးမေး ဒီနေ့ စရသွားပါတယ် ခင်ဗျား
ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရား by ဆရာတော် အရှင်သုမန ( သိရီသုမန...
Google ရဲ့ Body Browser နဲ့ လူ့ခန္တာကိုယ်ကို ရှိူးမယ်
အထွေထွေ ဗဟုသုတ ( 66 ) အိုင်တီ ( 49 ) အီးမေးလ် ( 15 ) Microsoft ( 12 ) Microsoft Word ( 12 ) Office ( 12 ) Tip ( 12 ) Word ( 11 ) ဆော့ဝဲ ( 11 ) Gmail (9) Google ( 8 ) ဆိုင်ဘာကမ္ဘာ ( 8 ) ဘာသာရေး ( 8 ) labs (7) wordpress (5) ဟာသ (5) လေထန်ကုန်း (5) feature (4) google (4) ဧးသိမ်း (4) ဖျော်ဖြေရေး (4) Firefox (3) features (3) Addon (2) Formula Field (2) Measurement Converter Smart Tag (2) Mozilla (2) Smart Tag (2) Unicode (2) security (2) ဒေါင်းလုပ် (2)4( 1 ) 440 ( 1 ) 80 ( 1 ) 8080 ( 1 ) Anti Virus ( 1 ) AutoText ( 1 ) Aye Chan ( 1 ) Back-up ( 1 ) Bhandanta Vicitsara ( 1 ) Big Endian ( 1 ) Buddhist canonical text ( 1 ) Bulk Email ( 1 ) Close ( 1 ) Command Reference ( 1 ) Cyber Defamation ( 1 ) Death Grip ( 1 ) Dispose ( 1 ) DivX ( 1 ) DotNet ( 1 ) Dropbox ( 1 ) EVD ( 1 ) Email ( 1 ) Epson ( 1 ) Everyone hasasong inside ( 1 ) Font ( 1 ) Forward mail ( 1 ) Friday the 13th ( 1 ) General Knowledge ( 1 ) Gmail Back-up ( 1 ) Gmail Program Policies ( 1 ) Gmail TOS ( 1 ) Google Earth ( 1 ) Google Groups ( 1 ) Gtalk ( 1 ) Guinness Book of Records ( 1 ) IM ( 1 ) Laborious Working worker ( 1 ) Little Endian ( 1 ) M.net Asian Music Awards ( 1 ) MKV ( 1 ) Macro-ToolsCalculate ( 1 ) Mail-merge ( 1 ) Myanmar Unicode Fonts ( 1 ) Naruto ( 1 ) Netwrok ( 1 ) Okāsa ( 1 ) Pandora ( 1 ) Pidgin ( 1 ) Prefetch ( 1 ) Printer ( 1 ) Programming ( 1 ) QoS ( 1 ) Quick Part Gallery ( 1 ) Quiz ( 1 ) Readyboost ( 1 ) Report Hate Speech on Blogger ( 1 ) SSC ( 1 ) SafeSearch ( 1 ) Service Required ( 1 ) TV ( 1 ) Teen ( 1 ) Title bar ( 1 ) Titlebar Tweaks Plus 10.03.07 ( 1 ) Track ( 1 ) Virus Removal Tool ( 1 ) Vista ( 1 ) Windows7( 1 ) Word 2003 ( 1 ) XviD ( 1 ) ant ( 1 ) auto reply ( 1 ) bot ( 1 ) cake ( 1 ) canned ( 1 ) cccp ( 1 ) codec ( 1 ) customised ( 1 ) cute ( 1 ) database ( 1 ) download ( 1 ) email addict ( 1 ) ending ( 1 ) flash ( 1 ) flv ( 1 ) friend ( 1 ) gif ( 1 ) google dashboard ( 1 ) http ( 1 ) http://www.facebook.com/myanmarexchange ( 1 ) https ( 1 ) iPhone ( 1 ) image ( 1 ) insert ( 1 ) is:mutted ( 1 ) jpeg ( 1 ) last ( 1 ) lorem ( 1 ) mahabote ( 1 ) mailmerge ( 1 ) membership ( 1 ) mute ( 1 ) online ( 1 ) optical illusion ( 1 ) outlook ( 1 ) pandorabots ( 1 ) password recovery ( 1 ) photo ( 1 ) plasq ( 1 ) png ( 1 ) response ( 1 ) sapi ( 1 ) sender ( 1 ) shippuden ( 1 ) show ( 1 ) sketchup ( 1 ) soft-coded subtitle ( 1 ) songsmith ( 1 ) sudoku ( 1 ) time ( 1 ) umber to Myanmar Text ( 1 ) undo send ( 1 ) up in the air ( 1 ) vbs ( 1 ) word processing ( 1 ) wysiwyg ( 1 ) zone ( 1 ) ကိတ်မုန့်ဖုတ် ( 1 ) ခံစားချက်များ ( 1 ) ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင် ( 1 ) ဆရာတော်ဥူးသုမင်္ဂလ ( 1 ) ဆုဒိုခု ( 1 ) ဇတ်သိမ်း ( 1 ) တိပိဋကဓရ ( 1 ) ဓမ္မစကြာ ( 1 ) နက်ဝပ် ( 1 ) နာရူတို ( 1 ) ပညာ ( 1 ) ပန်ဒိုရာ ( 1 ) ပရီဖက်ခ်ျ ( 1 ) ပါဏာတိပါတ ( 1 ) ပါဠိ ( 1 ) ပုဂံ ( 1 ) ပရိုဂရမ်းမင်း - စကရစ် ( 1 ) ဗုဒ္ဓဘာသာ ( 1 ) ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ ( 1 ) ဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲ ( 1 ) ဘာလို့ ရှိခိုးတာလဲ ( 1 ) ဘုရား ( 1 ) ဘုရားရှိခိုး ( 1 ) မင်းကွန်းဆရာတော် ( 1 ) မတရားညှစ်ထားခြင်း ( 1 ) မဟာဘုတျ ( 1 ) မိုက်ကရိုဆော့ ( 1 ) ရင်ခုန်သံ ( 1 ) ရယ်ဒီဘုစ် ( 1 ) ဝင်ပူးခြင်း ( 1 ) သိကောင်းစရာ ( 1 ) သူရဲ ( 1 ) အကျိုး ( 1 ) အခက်ခဲဆုံးစာမေးပွဲ ( 1 ) အင်္ဂလိပ် ( 1 ) အစိမ်းသေ ( 1 ) အပြစ် ( 1 ) ဥာဏ်ရည်အကောင်းဆုံး ( 1 ) ဧးချမ်း ( 1 ) ဩကာသ ( 1 ) ကျောပိုးအိတ် ( 1 ) ကျေးဇူးတင်စကား ( 1 ) ဒေါက်တာသန်းထွန်း ( 1 ) မြန်မာ ( 1 ) ရှစ်ပူးဒန်း ( 1 ) らいはいぶん ( 1 ) ナルト ( 1 ) 数独 ( 1 ) 疾風伝 ( 1 ) 礼拝文 ( 1 ) 終わり ( 1 )